Inkqubo ye-3D ye-Civil yemisebenzi yoluntu-Inqanaba 3 -Geofumadas
Ikhaya/Izifundo ze-AulaGEO/Inkqubo ye-3D ye-Civil yemisebenzi yoluntu-Inqanaba 3
Ukulungelelaniswa okuphambili, imiphezulu, amacandelo eminqamlezo. Funda ukwenza uyilo kunye nemisebenzi esisiseko yomgama ngesoftware ye-Autocad Civil3D esetyenziswe kwiTopography kunye neMisebenzi yoLuntu
Nguwo okwesithathu seti ye Izifundo ezi-4 ebizwa ngokuba yi "Autocad Civil3D yeTopography kunye neMisebenzi yoLuntu" eya kukuvumela ukuba ufunde indlela yokuphatha le software ye-Autodesk emangalisayo kwaye uyisebenzise kwiiprojekthi ezahlukeneyo kunye nemisebenzi yokwakha. Yiba yingcali kwi-software kwaye uya kukwazi ukuvelisa umhlaba, ukubala izinto eziphathekayo kunye namaxabiso okwakha kunye nokudala uyilo olukhulu lweendlela, iibhuloho, i-sewers, phakathi kwabanye.
IZIQULATHO ZENKXASO-MALI YOKUGQIBELA (3 / 4)
-Imodeli yokuhlela umxholo, ukutolika, ukuphuculwa, ukuthunyelwa kwelinye ilizwe.
-Izitayile zemodeli yomhlaba, imiboniso, uhlalutyo lwemephu.
-Ukuba, iingxelo zevolumu phakathi kobuso obahlukeneyo.
UNYANGO LWEHORIZONTAL II
-Ulawulo lwesitayile esiphambili
-Ukuhlela kunye nokwakhiwa kweenqobo zokuyila kunye neetafile.
-Umzobo, wejometri kunye nohlelo lwetabular (advanced).
- I-axes ezihambelana kunye nobubanzi obungaphezulu.
Inkcazo kunye nemizobo ye-cant.
UNYANGO LWEENDAWO II
-Ukwakhiwa ngeetafile zoyilo.
-Uqikelelo lwezinto ukusuka kwisityalo ukuya kwiprofayili.
-Ukuphathwa okuphezulu kwezitayile, iibhendi.
Inkcazo yeendibano (isakhiwo). Advanced.
Uyilo kunye nohlengahlengiso lwendibano, iikhowudi kunye nonxibelelwano.
Inkcazo yenguqu ethe nkqo kwaye nkqo
UMSEBENZI WOKUGQIBELA II
Umsebenzi osemgceni kunye nolungelelwaniso oluninzi.
Umsebenzi osemgceni kunye nemimandla eyahlukeneyo kunye nezakhiwo.
Ukuhlelwa okuphambili kwepaseji, amacandelo, ukuhamba rhoqo, imimandla, umphezulu
AMANQAKU ECANDELO II
-Ukuphathwa okuphezulu kwezitayile, iitafile, izinto eziza kuboniswa.
-Imigca yokuhlela yesampula.
-Umiselo oluphambili lwezixhobo kunye namaxabiso.
-Umzobo obukhulu kunye neengxelo.
Ikhosi ye-Civil 3D yemisebenzi yoluntu - iNqanaba loku-4